आफ्नो जन्मभुमी बिहारमा गरियाे सुशान्तको अन्तिम सं’स्कार, हार्दिक श्र’द्धाञ्जलि ! – सडक मिडिया
आफ्नो जन्मभुमी बिहारमा गरियाे सुशान्तको अन्तिम सं’स्कार, हार्दिक श्र’द्धाञ्जलि !
सुशान्त सिंह राजपुतको नि’धनले धेरैको आँशु रोकिएको छैन्न । आइतबार नि’धन भएका राजपूतको सोमबार नै दा’हसंस्कार गरिएको छ । विले पार्लेस्थित पवन हंस श’वदाह गृहमा परिवारका सदस्य र फिल्मकर्मीको उपस्थितिमा अ’न्तिम संस्कार बुबा र बहिनीले दागबत्ति दिएर गरेका थिए ।
४ दिदी बहिनीको एक्लो भाइले यस्तो कदम चालेपछि परिवार शो’कमा डुब्यो । उनकी दिदी स्वेता सिंह बुबालाई सम्हाल्न अमेरिकाबाट आइन् ।
खबरका अनुशार सुशान्तको अ’न्तिम संस्कार अर्थात अस्ति विसर्जन गर्न उनीहरु भारतको बिहार स्थित पटना पुगेका छन् । सुशान्तकी दिदी स्वेता सिंहले फेसबुक मार्फत उक्त्त कुराको जानकारी दिएकी हुन् ।
“अमेरिकाबाट म सकुशल पटना आइपुगेको छु । आज हामी हाम्रो प्यारो भाइको अस्ती बि’सर्जन गर्दैछौं । तपाइहरु सबैले उस्लाई माया गर्दै प्राथना गर्नुहोला । हामी पनि यहाँबाट प्राथना गर्छौं सबैजना मजबुत भएर उस्लाई बि’दा गरौं ।” उनले लेखेकी छिन् ।
अघिल्लो पोष्टमा उनले भाइलाई मायाले भरिएको स्टाटस लेखेको थिइन् । सरी मेरा सोना भन्दै सुरु गरेकी उनले पी’डा भरिएका कुराहरु गरेकी छिन् । १६ वर्षको उमेरमा नै आमा गु’माएका सुशान्तलाई तिनै दिदी र बुबाले सम्हाल्दै आएका थिए ।
यस्का साथै उनीहरु आफ्ना काका र सानीमाहरु सँग पनि निकट थिए । उनको मृ’त्युको पीडा खप्न नसकेर उनको काकाको बुहारीको नि’धन भएको थियो ।
Previous Post: भारतसँग यु’द्ध गर्न खोजेको भन्दै काठमाडौँमा चीनविरुद्ध प्रदर्शन
Next Post: नेदरल्याण्डमा महात्मा गान्धीको मूर्तिमा ताे’डफाेड